May 7, 2009 ao amin'ny 5: 01 PM
Ny mpandinika raharaham-barotra dia tokony ho tsara amin'ny fanadihadiana sy ny famantarana ny fironana. Ny fanombohana 3 - 6 volana dia afaka manamboatra na manapaka vokatra iray indrindra amin'ny sehatry ny teknolojia fohy amin'ny fiainana.
May 8, 2009 ao amin'ny 9: 19 PM
Lahatsoratra mahafinaritra! Izahay olona mamorona dia miroborobo amin'ny fampahalalana izay entin'ny mpandinika lehibe eo amin'ny latabatra hamoronana fitaovam-barotra mivantana. Mila mpandinika mahay bebe kokoa isika mba handroso sy ho afovoany.